IBM Thinkpad COMS password ပြဿနာ — MYSTERY ZILLION
IBM Thinkpad COMS password ပြဿနာ
IBM Thinkpad ကို power on လိုက်ရင်... Memory တွေ...CPU တွေစစ်ပြီး... command prompt လို ကွန်ပျူတာပုံနဲ့ သော့ပုံနဲ့ cursor လေးပဲပြထားတယ်...။ Password တောင်းတာထင်လို့ password ကိုလည်းမသိတော့ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့။စက်က ကျွန်တော့် အမရဲ့သူငယ်ချင်းစက်ပါ။တော်တော်တော့ဟောင်းနေပြီ....။CD Drive လည်းမပါဘူး။ ၃ ခါရိုက်ထည့်ပြီး ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး...။ CMOS battery ကလည်းဖြုတ်လို့မရဘူး..။
CMOS password ကြောင့်လား...။BIOS setting ကို၀င်ချင်ရင် F1 နဲ့၀င်လို့ပြပေမယ့်၀င်လိုက်ရင် အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုပဲ...password တောင်းပြန်ရော...။ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ...window လည်းဆက်မတက်တော့ဘူး...
peace57 wrote: »
Format ချလည်း မရပါ။
IBM Laptop တွေမှာ Bios ရဲ့ password ကို Bios chip မှာ မသိပ်ဘဲ
lock လုပ်တဲ့ Chip သပ်သပ်ပါတတ်ပါတယ်။
Security အတွက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ထားတာပါ။
CMOS Battery ဖြုတ်လိုက်ရုံလောက်နဲ့မရပါဘူး။
ဒီ Link မှာပါတဲ့ backdoor တွေကို စမ်းကြည့်ပါဦး
there is some specific manual to reset password for thinkpad.
peace57 ရေ ... IBM thinkpad
laptop တွေမှာ power on password
supervisor password နဲ့ HDD password ဆိုပြီးပေးလို့ရတယ် ။ peace57
peace57 ကွန်ပျူတာက power on passwordပေးထားတယ်ထင်တယ် ...။ သူကိုပြန်ဖျက်ချင်ရင်တော့ Motherboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ jumper ခလုတ်လေးတွေ on/off လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် ...။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ service center တစ်ခုမှပြကြည့်ပါ ..။ ဒါမှမဟုတ်
အဲဒီလင့်ကနေတဆင့်လေ့လာကြည့်ပါ ..။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ..။
အဲဒါ......supervisor password (SVP) လို့ခေါ်တယ်......
Mother Board ပေါ်က....IC လေး ၁ ခုမှာ...မှတ်ထားတာ....
circuit ၁ ခုဆင်ပီး......read ရမှာ.......လုပ်ပေးဖူးတယ်..........
အသေးစိတ်သိချင်ရင်...... [email protected] ကိုadd လိုက်...........
Software and Circuit ရှိတယ်..............